Xulka Qaranka Itoobiya oo Rajadoodu Sarayso iyo Xulka Nigeria oo Aleelo Ku Waalatay. - Cakaara News
Waxaa Maanta abaaraha makhribka isku hardiyi doona lugtii labaad ee lagu kala bixi lahaa Caasimada Nigeria Xulalka Qaranka Kubada Cagta ee Dalka Itoobiya iyo Xulka Dalka Nayjeeriya oo makhribnimada ay Ciyaartani ka dhici doonto.
Lugtii 1aad ee labadan kooxood ayaa ka dhacday garoonka Kubada Cagta ee magaalada Addis-ababa halkaasoo lagu xaqiiqsaday in aan Dhayal lagu loodin karin Xulka Itoobiya oo ka yaabsaday Xidigyadii reer nayjeeriya ee ka ciyaara Kooxaha ugu caansan aduunka.
Khuburada falanqaysa Ciyaaraha ayaa saadaal Fiican ka muujiyay Mar ay isbarbardhig ku sameeyeen Ciyaartoyda labada dal in ay Ciyaartoyda Xulka qaranka Itoobiya ay ku dur-durin Doonaan Xulka Nayjeeriya oo ay ka xoog roonaayeen Ciyaartii kudhexmartay Magaalada Addis-ababa.
Dhanka kale waxaa balaf nagu soo gaaray in Nayjeeriya oo caan ku ah Faaliyayaasha iyo aleelaha uu faaliyahoodii u sheegay in Ciyaartan Galabta ay Xulka Qaranka Itoobiya natiijo aan la filayn kaga badin doonaan halkaasoo sida la soo wariyay Ninkii aleesha u eegay ay ku xidheen.
isku soo wada duuboo xulka qaranka itoobiya ayaa u gaashaantay Sidii ay ugaga dhabayn lahaayeen Balanqaadkoodii ahaa in ay Xulka Qaranka DFI ay Sinaba kaga hadhi doonin ka Qaybgalka Ciyaaraha Adduunka.